Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-pandrindrana an'i Rudolph Valentino | John Travolta sy ny Medium Voice Directive an'ny Leslie Flint - Fikambanana vaovao momba ny vatana vaovao
Ny fotoana voalohany nahitako ny fifandraisana eo amin'ny vatana vaovao ao an-trano John Travolta ary Rudolph Valentino dia manodidina ny taona 2000, satria navoaka tao amin'ny tranokalan'ny namako, Joseph Myers. Nodimandry i Joe tamin'ny taona 2012. Joe dia nahazo ny fiainany taloha toa an'i Edward Bellamy ary tsapany fa ny fiasa amin'ny tarehy dia afaka mijanona hatrany amin'ny androm-piainany iray hafa. Raha izany dia mitovy amin'ny ahy ny tantarany. Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny Joe dia asongadin'ny bokiko voalohany, Fiverenan'ny revolisionera
Nanomboka niara-niasa tamin'ny media tranainy Kevin Ryerson tao amin'ny 2001 aho ary nahatsikaritra fa mpitari-dalana iray izay tarihin'ny serasera Ahtun Re dia afaka mametraka ny mari-pamantarana niainany tamin'ny lasa sy ny marina. Taorian'izay dia nodinihiko ireo tranga izay nalefan'i Joe tao amin'ny tranonkalany niaraka tamin'i Ahtun Re, izay nifanaraka tamin'ny 60% amin'ireo lalao izay noraisin'i Joe tamim-pahamalinana na navoaka avy amin'ny loharano hafa ary tsy nanaiky ny momba ny 40% ny tranga navoaka tao amin'ilay tranonkala. Ao amin'ny bokiny sy ny tranonkalany, i Joe dia nanao fandraisana andraikitra manan-danja mba hahatakarana ny fomba fiasan'ny vovoka indray ary nampihetsi-po foana izy fa nanohy ny asany aho.
Ny tranga iray neken'i Ahtun dia nanaiky fa i Rudolph Valentino dia nanjary indray niorina indray tamin'i John Travolta.
Ny mahaliana, i Rudolph Valentino dia tena liana tamin'ny fisehoan-javatra ara-panahy ary ny fanahin'i Valentino dia nitana anjara toerana lehibe teo amin'ny fampandrosoana Leslie Flint, izay malaza indrindra amin'ny feo feo amin'ny tantara.
John Travolta dia ara-panahy ihany koa ary nanenjika ny fivoarany izy na dia Scientology aza. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i Leslie Flint sy ny firotsahan'i Valentino | Travolta ao amin'ny tantaran'i Flint, mankanesa any:
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ny endriky ny endriky ny Valentino sy Travolta dia tsy miova.
Innate Past Life Talent: Ny sarimihetsika Romeo tamin'ny lasa dia navaozina tamin'ny vanim-potoana ankehitriny.
Fiovan'ny maha-olona avy amin'ny Fomba Fahafatesana ho an'ny hafa: Teraka tany Italia i Rudolph Valentino, i John Travolta kosa teratany any New Jersey.